စာရင်းအင်းများ: ဒီကွတ်ကီးများသည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့လာရောက်လည်ပတ်သူအရေအတွက်ကဲ့သို့သတင်းအချက်အလက်များကိုသိုလှောင်သည်, ထူးခြားတဲ့ visitors ည့်သည်အရေအတွက်, ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ဘယ်စာမျက်နှာများသွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြသည်, ခရီးစဉ်၏အရင်းအမြစ်စသည်တို့. ဤအချက်အလက်များသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဝဘ်ဆိုက်မည်မျှတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်ကိုနားလည်ရန်နှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်ကူညီသည်.
စျေးကွက်ရှာဖွေရေး: ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သည်ကြော်ငြာများကိုပြသသည်. ဤကွတ်ကီးများသည်ကျွန်ုပ်တို့မှကျွန်ုပ်တို့ပြသသောကြော်ငြာများကိုကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ရန်အသုံးပြုသည်၊ သို့မှသာသူတို့သည်သင့်အတွက်အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်. ဤကွတ်ကီးများသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဤကြော်ငြာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး၏ထိရောက်မှုကိုခြေရာခံရန်ကူညီသည်.
ဤ cookies များကိုသိမ်းဆည်းထားသောအချက်အလက်များသည် third-party ကြော်ငြာပံ့ပိုးသူများကသင့်အားအခြား browser များပေါ်ရှိကြော်ငြာများကိုပြရန်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်.
အလုပ်လုပ်ပါတယ်: ၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောလုပ်ဆောင်မှုများကိုကူညီသောကွတ်ကီးများဖြစ်သည်. ဤလုပ်ဆောင်ချက်များတွင်ဗီဒီယိုများကဲ့သို့သောအကြောင်းအရာများကိုထည့်သွင်းခြင်းသို့မဟုတ်လူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းများတွင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်အကြောင်းအရာများကိုမျှဝေခြင်းများပါဝင်သည်.
ဦး စားပေးမှုများ: These cookies help us store your settings and browsing preferences like language preferences so that you haveabetter and efficient experience on future visits to the website.
ဒီအပြင်, မတူညီသော browser (ဘရောက်ဆာ) များသည်ဝက်ဘ်ဆိုက်များမှအသုံးပြုသော cookies များကိုပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့်ဖျက်ပစ်ရန်နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးကိုပေးသည်. cookies များကိုပိတ်ရန် / ဖျက်ရန်သင်၏ browser ၏ချိန်ညှိချက်များကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်. ကွတ်ကီးများကိုမည်သို့စီမံခန့်ခွဲရမည်နှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိရန်, wikipedia.org ကိုသွားပါ, www.allaboutcookies.org.